ဣဇာက်ကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်း | The Offering of Isaac | Real Conversion
(SERMON # 70 ON THE BOOK OF GENESIS)
၂၀၁၃၊ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ တဲ့တော်နှစ်ခြင်း
ကမ္ဘာဦးကျမ်းမြတ်တော်ထဲက ခုနှစ်ဆယ်မြောက်သော ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဒေသနာ တော်အားဖြင့် အယောက်စီတိုင်းအဖို့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမည်ဟု မျော်လင့်ပါသည်! ကမ္ဘာ၊ ၂၂း၁ ကို ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ် ရပ်လျှက် အတူတကွဖတ်ကြားကြပါစို့။
“ထို့နောက်မှ ဘုရားသခင်သည်၊ အာဗြံဟံကို စုံစမ်းခြင်းငှါ၊ အာဗြံဟံဟုခေါ်တော်မူ၍၊ အာဗြံဟံက အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊ သင်သည် အလွန်ချစ်သော တစ်ယောက်တည်း သောသား ဣဇာက်ကို ယူ၍မောရိပြည်သို့ သွားလော့၊ ငါပြလတံ့သောတောင်ပေါ်မှာသူ့ကို မီးရှို့ရာ ယဇ်ပြု၍ ပူဇော်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂း၁-၂)။
ဤကျမ်းပိုဒ်ဖေါ်ပြချက်များသည် နက်နဲလွန်းသဖြင့်၊ ၎င်းကျမ်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ဝေငှဖို့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အနည်းငယ်လောက်အချိန်ယူပြီး ရှင်းပြလိုပါသည်။ ဦးစွာပုံပြင် ပြောပြပါမည်။ သူ့သား ဣဇာက်ကို ဖွားမြင်သောအခါ အာဗြံဟံသည် အသက်အရွှယ်ရင့်နေပြီ ဖြစ်သည်။ သားဖွားမြင်လိမ့်မည်ဟု အာဗြံဟံသည် အသက်ခုနှစ်ဆယ်ငါး အရွှယ်၌ ဘုရားသခင်ကတိ ပြုခဲ့ပါသည်။ အာဗြံဟံသည် သားဣဇာက်ကို ဘွားမြင်ဖို့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ငါးနှစ် စောင့်ရပါသည်။ အသက်တော်တစ်ရာပြည့်မှသာ သားကို ဘွားမြင်ခဲ့ပါသည်။ ဖတ်ကြားခဲ့သော ကျမ်းပိုဒ်အရဆိုလျှင်၊ ဣဇာက်အသက်သည် ၂၆ သို့မဟုတ် ၂၇နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ယခုတွင် ဘုရားသခင်သည် အာဗြံဟံကို စုံစမ်းနေပါသည်။ ဘုရားသခင်က အာဗြံဟံအား အချစ်ဆုံးသားဣဇာက်ကို ခေါ်ဆောင်ပြီး မောရိတောင်ပေါ်သို့ သွားစေခဲ့ပြီး “ငါပြလတံ့သော တောင်ပေါ်မှာ သူ့ကို မီးရှို့ရာယဇ်ပြု၍ ပူဇော်လော့” ဟုမိန့်တော်မူသည် (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂း၂)။ ထိုသားအဖတို့ ၎င်းနေရာသို့ သွားခဲ့ကြသည်။ အာဗြဟံ သည် ယဇ်ပလင်ပြုရန် ထင်းကိုယူဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဣဇာက်ကို တုတ်နှောင်ထားပြီး ၎င်းယဇ်ပလင်ပေါ် တင်တော်မူခဲ့ပါသည်။
“မိမိလက်ကို ဆန့်၍၊ သားကိုသတ်ခြင်းငှါ၊ ဓါးကိုကိုင်ယူလေ၏။ ထိုအခါ ထာ၀ရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်က အာဗြဟံ၊ အာဗြဟံ ဟု ကောင်းကင်ပေါ်က ခေါ်လေ၏။ အာဗြံဟံက အကျွန်ပ်ရှိပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊ ထိုလုလင်ကို မထိခိုက်နှင့်၊ အလျှင်းမပြုနှင့်။ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွှံ့သည်ဟု ယခု ငါသိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်၏သား၊ သင်၌တစ်ဦးတည်းသောသားကို ငါတောင်း၍ သင်သည် ငါ့ကို မငြင်းဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ အာဗြံဟံသည် မြော်ကြည့်၍ မိမိနောက်မှာ ချူံပုတ်၌ ချိုညိလျှက်ရှိသော သိုးကို မြင်လေ၏။ ထိုသိုးကိုသွား၍ယူပြီးလျှင် မိမိသားကိုယ်စား မီးရှို့ရာယဇ်ပြု၍ ပူဇော်လေ၏” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂း၁၀-၁၃)။
၎င်းသည် အဖြစ်အပျက်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းပြီး ပြည့်စုံကုံလုံသော အကြောင်းအရာပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်၌ မြောက်များစွာသော အချက်အလတ်များကို ဟောကြားဖို့ ယနေ့အထိ ချီထုံချထုံဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာအိပ်ခ်ျ.စီလီယိုပေါ့က ၎င်းကျမ်းပိုဒ် နှင့်ပါတ်သတ်၍ မှတ်ချက် ပေးထားသည်ကို အကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုဆရာဟော ကြားခဲ့သည်မှာ၊ “တရားဟောပညာအရဆိုလျှင် ၎င်းကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပတ်သတ်၍ တရားဟောချက်နှစ်ပိုဒ် ထုတ်နုတ်၍ နိုင်ပါသည်” (H. C. Leupold, D.D., Exposition of Genesis, Volume II, Baker Book House, 1985 edition, p. 637).
အတွေးထဲ၌၊ ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ “အနည်းဆုံး” ဒေသနာနှစ်ပုဒ်ဖြင့်ဝေငှတိုက်တွန်း နိုင်ပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တော်မြတ်အားဖြင့် အချက်လေးချက်ဖြင့် ဝေငှပါမည်။
၁။ ပထမ၊ ထိုကျမ်းပိုဒ်က ယုံကြည်ခြင်းကို စမ်းသပ်နေပါသည်။
ကျမ်းတစ်ပိုဒ်၌ “ထို့နောက်မှ ဘုရားသခင်သည်၊ အာဗြံဟံကို စုံစမ်းခြင်းငှါ၊ အာဗြံဟု ခေါ်၍” (ကမ္ဘာ ၂၂း၁) ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဟေဗြဲဘာသာစကားဖြင့် “ အနာစအ ဒဒကို ဒဒအနျအဒဒ စုံစမ်းခြင်း ဟု အဓိပါယ်ရှိပါသည်။ ဒေါက်တာ မက္ကီးပြောကြားသည်မှာ၊ ဒဒအနာစအဓ သွေးဆောင်ခြင်းကို အထူးသဖြင့် သုံးနှုန်းထားသည်ကို၊ တမန်တော်တို့၏ဩဝါသစာစောင်၌ ဘုရားသခင်သည် ဘယ်တော့မှ မကောင်းသောအရာအားဖြင့် သွေးဆောင်ခြင်းမရှိဟု ရေးသားပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူတို့ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ စုံစမ်းခြင်းပြုခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် အာဗြဟံကို စုံစမ်းခဲ့ပါသည်” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1981, volume I., p. 90).
ကျမ်းမြတ်တော်၌ ကြီးမားသောစုံစမ်းခြင်းလေးမျိုးဖြင့် ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအားစုံစမ်းခဲ့ပါသည်။ ထိုစုံစမ်းခြင်းတိုင်း၌ တစုံတရာမိမိချစ်မြတ်နိုးသောအရာကိုစွန့်လွတ်ဖို့ တောင်းဆိုချက်များ ပါဝင်နေပါသည်။ ဦးစွာ ပထမ၊ ပြည်တော်နှင့်အမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်ထဲက ထွက်ခွါသွားဖို့ ခေါ်တော်မူခဲ့သည် (ကမ္ဘာ၊ ၁၂း၁)။ ဒုတိယ၊ မိမိချစ်ရသောတူမောင် လောတ နှင့်ခွဲခွါရမည်ဖြစ်သည်။ (ကမ္ဘာ၊ ၁၃း ၁-၁၈)။ တတိယ၊ သား ဣရှမေလ အဖို့ချမှတ်ထားသော စီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းရမည်ဖြစ်သည် (ကမ္ဘာ၊၁၇း၁၇-၁၈)။ စတုတ္ထ၊ ချစ်လှစွာသော တစ်ဦးတည်းသော သားဣဇက် အားမီးပူဇော်ရန်ဖြစ်သည်။ အာတာ. ဒဗလူပိန့် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ-
“ယုံကြည်သူအသက်တာ၌ ခရစ်ယာန်အသက်တာကြီးထွားရင့်ကျက်ဖို့ရန် စုံစမ်း၊ စမ်းသပ် ရသည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ သူတပါးတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်ကြီးမားသော စမ်းသပ်ခြင်းမျိုး ကြုံတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အာဗြဟံကို ထိုသို့စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထပ်ခါတလဲလဲ စုံစမ်းခဲ့ပါသည်။ ယနေ့၌ ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းဘယ်တော့မှ မတွေ့ရတော့ပေ။ ဘုရားသခင်တောင်းဆိုသည်မှာ “ငါ့သား၊ သင့်နှလုံးသားကို ငါ့အားပေးလော့” (သုတ္တံ ၂၃း၂၆) ဟူ၏။ ထိုအရာက ကျွန်ုပ်တို့၏ ညဏ်ပညာမဟုတ်၊ အစွမ်းသတ္တိလည်းမဟုတ်၊ ဓနဥစ္စာလည်းမဟုတ်၊ နှလုံးသားကို ဦးစွာတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိတောင်းဆိုချက်ကို တုန့်ပြန်ဖို့ ကြီးမားသောလက်ဆောင်ဖြင့် ကြီးမားသော ဆုကျေးဇူးတော် များ အမှန်တကယ် နှလုံးသားထဲက တုန့်ပြန်ခဲ့သည်၊ အပြောစကားဖြင့် သက်သက်မဟုတ် ခဲ့ချေ။ ထိုသို့အာဗြဟံအား စုံစမ်းစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 edition, p. 226).
ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကြားရသည်နှင့် တပြိုင်နက်၊ ဦးစွာကြီးမားသော စမ်းသပ်ခြင်းသည် အမြဲလာလေ ရှိသည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “ထိုနည်းတူ သင်တို့တွင် အကြင်သူသည် မိမိ၌ရှိသမျှကို မစွန့်ဘဲနေ၏။ ထိုသူသည် ငါ့တပည့်မဖြစ်နိုင်” (လုကာ ၁၄း၃၃) ဟုလာပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အရာရာထက် ယေရှုကိုချစ်ရမည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ အပြစ်ကို သင်စွန့်ပယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤလောကဥစ္စာစည်းစိမ်တို့သည် ဒုတိယနေရာတွင် ရှိနေရပါမည်။ လိုချင်တပ်မက်မှုအားလုံး စွန့်လွတ်ရပါမည်။ လောကီအရာကို လိုချင်တပ်မက်သောစိတ်ရှိပြီး ခရစ်ယာန်ကောင်းတစ်ယောက်သင်မဖြစ်နိုင်ပေ! တစုံတစ်ဦးအနေဖြင့်ပြောနိုင်သည်မှာ “ဤအရာက ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းကို အထိနာစေပါသည်” ဟူ၍ ပြောပေမည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “သင်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အစေကို၎င်း၊ လောကီစည်းစိမ်၏ အစေကို၎င်း မခံနိုင်ကြဟုမိန့်တော် မူ၏” (လုကာ ၁၆း၁၃)။ ယေရှုဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား “ငါ၌ဆည်းကပ်လိုသောသူသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ရမည်။” (လုကာ ၉း၂၃)။ ဤနေရာ၌ လူတို့သည် ထိမိ၍ လဲကြတော့၏။ လောကီတပ်မက်ခြင်းကို မစွန့်လွတ်ဘဲ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လိုကြပါသည်။ အသက်တာအသစ်ပြုပြင်ခြင်း မရှိဘဲ ကယ်တင်ခြင်းရရှိလိုကြပါသည်။ ထိုအရာသည် မဖြစ်နိုင်ပါ! လုံး၀မဖြစ်နိုင်ပါ! ထိုအရာသည် အရှေ့အနောက် မညီညွတ်သော အရာဖြစ်သဖြင့် မတွေးနိုင်သောအရာပင် ဖြစ်သည်! “ထိုနည်းတူ သင်တို့တွင် အကြင်သူသည် မိမိ၌ရှိသမျှကို မစွန့်ဘဲနေ၏။ ထိုသူသည် ငါ့တပည့်မဖြစ်နိုင်” (လုကာ ၁၄း၃၃) ဟူ၍လာပါသည်။
မောရိတောင်ပေါ်တွင် အာဗြဟံထိုသို့ တွေ့ကြုံခဲ့ပါသလား? ဘုရားသခင်က အာဗြံဟံကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ သူ့၏သားထက် လောကီအရာများကို စွန့်လွတ်ခြင်းဆန္ဒ အာဗြဟံ၌ရှိခဲ့ပါသလား? ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော် မူသည်ကား “သင်သည် အလွန်ချစ်သော တယောက်တည်းသောသား ဣဇာက်ကို ယူ၍ မောရိပြည်သို့ သွားလော့။ ငါပြလတံ့သောတောင်ပေါ်မှာ၊ သူ့ကို မီးရှို့ရာယဇ်ပြု၍ ပူဇော်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂း၂)။ ထိုသို့သော စုံစမ်းခြင်းကို သင်လည်းတွေ့ကြုံ နိုင်သည်။ အလွန်ချစ်သောအပြစ် ကို ယူ၍ မီးရှို့ရာယဇ်ပြုလျှက် ပူဇော်လော့။ ထိုသို့သင်ပြုမှာလား? အကယ်၍သင်သည် ထိုသို့မလုပ်ဆောင်ပါက စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်တစ်ဦး မဖြစ်နိုင်ပေ။ သင့်အသက်တာ ဘယ်တော့မှ! ဘယ်တော့မှ! ဘယ်တော့မှ! ခရစ်ယာန်တယောက် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုဓမ္မသီချင်းဟောင်းကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းနေပါသည်!
စောင့်နေရမည် ကိုယ်တော်မြတ်၏ ခြေတော်ရင်းမှာ
ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သွန်းအသွေးတော် ကျွန်ုပ်မြင်ရပါ
ဆေးကြောလျှင် ဖြူမည်မှန်ပါ၊ မိုးပွင့်ထက်သာ
ဆေးကြောလျှင် ဖြူမည်မှန်ပါ မိုးပွင့်ထက်သာ
(၁၈၂၈-၁၈၉၆ ခုနှစ် ဂျင်းနိကောဆန် ရေးသားသော “မိုးပွင့်ထက်ဖြူခြင်းကျူး”)။
၂။ ဒုတိယ၊ ထိုကျမ်းပိုဒ်က ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို ဖော်ကျူးပါသည်။
ဘုရားသခင်အဖို့ မိမိချစ်ရသောသား ဣဇာက်ကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားသော အာဗြံဟံ၏ ရင်တွင်း ခံစားချက်ကို တွေ့ကြည့်ပါ!
“သင်အလွန်ချစ်သော တယောက်တည်းသောသား ဣဇာက်ကိုယူ၍ သူ့ကို မီးရှို့ရာယဇ် ပြုလျှက် ပူဇော်လော့” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂း၂)။
အာတာ ဒပလျူ ပိန့်ခ် ပြောကြားသည်မှာ၊ “သားတော်ဘုရားကိုမဟုတ်ဘဲ ခမည်းတော်ဘုရား အားကျွှန်ုပ်တို့ ရှေ့မှောက်၌ ယူဆောင်လာခြင်းသည်ဓမ္မာဟောင်းကာလ၌လည်း အလွန်နည်းပါးလှသော ပုံရိပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် (ဓမ္မာဟောင်း၌ထိုသို့သော ပုံစံနမူနာအခြား မရှိတော့ပါ) အဖခမည်းတော်၏ နှလုံးသား ကိုပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည် အလွန်ကြီးမားလှသော သားတော်ဘုရား ကာရာနီကုန်းပေါ် အသေခံရမည်ကို ကြိုတင်ဟောခြင်းဖြစ်သတည်း” (ဏငညုယ ငဘငိယ စ. ၂၂၂).
“မိမိသားတော်ရင်းကိုမနှမြောဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှအဖို့စွန့်တော်မူသောသူ” (ရောမ၊ ၈း ၃၂)။
မစ္စတာပိန့်ခ်ပြောခဲ့သည်မှာ၊ အို! ဝိညာဉ်တော်ဘုရားထိုနေရာ၌ ယဇ်ပူဇော်ဖို့ရန် (အလားတူ) ပုံရိပ်ဖြစ်သော (အာဗြဟံ) နှင့် ပုံရိပ်ကိုပြည့်စုံစေသော (အဖခမည်းတော်) တစ်ယောက်တည်း သောသား- ငါချစ်မြတ်နိုးသောသား! အားအမှန်တကယ်ပူဇော်ရန်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ၊ ၂၂။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်တွင်သားဣဇာက်ထက်ပိုသောဖခင်၏ နှလုံးသား ကိုထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်” (ဏငညုယ ငဘငိ.) အာဗြာဟံအားဖြင့်ထင်ရှားစေသကဲ့သို့၊ ခမည်းတော်ဘုရား၏သားတော် ယေရှုအား ကားတိုင်ပေါ်အသေခံစဉ်တွင်ကျွှန်ုပ်တို့အားထင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။
“ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာ၀ရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည်မိမိ၌ တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော် မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏” (ယော၊ ၃း ၁၆)။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်၌၊ မေတ္တာတော်ရှင်ခမည်းတော်ဘုရား၏ ယုံကြည်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းကို ကျွှန်ုပ်တို့တွေ့ ရပါသည်။ သို့ပါသော်လည်းထိုထက်မကသော နုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းရှိပါသေး၏။
၃။ တတိယ၊ ထိုကျမ်းပိုဒ်က ခရစ်တော်ဘုရားသေခြင်းခံရသည့်တိုင်နာခံခြင်းကိုပြသသည်။
“သွားကြစဉ်တွင်၊ ဣဇာက်သည်အာဗြဟံကိုအဘဟုခေါ်လျှင်၊ ငါ့သား ငါရှိ၏ ဟုအာဗြဟံထူးလေ၏။ ဣဇာက်ကလည်းမီးပါ၏ထင်းလည်းပါ၏ ယဇ်ရှို့ရာဖို့ သိုးသငယ် ဘယ်မှာရှိသနည်းဟု မေးလျှင်၊ အာဗြဟံက ငါ့သား ယဇ်ရှို့ရာဖို့ သိုးသငယ်ကို ဘုရားသခင် သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏။ ထိုသို့ နှစ်ယောက်အတူသွား၍ ဘုရားသခင် မိန့်တော်သော အရပ်သို့ရောက်ကြသောအခါ၊ အာဗြဟံသည် ယဇ်ပလင်ကိုတည်၍ ထင်းကို ခင်းပြီးလျှင် သား ဣဇာက်ကို ချည်နှောင်၍ ယဇ်ပလင်ထင်းပေါ်မှာတင်ထား၏။ မိမိလက်ကို ဆန့်၍ သားကိုသတ်ခြင်းငှါဓါးကို ကိုင်လေ၏” (ကမ္ဘာ၊ ၂၂း ၇-၁၁)။
နူးညံ့သိမ်မွှေးခြင်းနှင့်နာခံခြင်းဖြင့်သေခြင်းသို့တိုင် ဣဇာက်လျှောက်လိုက်ခဲ့သည်ကို အံ့ဖွယ် တွေ့ရသည် မဟုတ်ပါလား? ဣဇက်သည် ပုံရိပ်ဖြစ်ပြီး ယေရှုသည်ပုံရိပ်ကို ပြည့်စုံစေသော သူဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည်သေခြင်းတိုင်အောင်နာခံသကဲ့သို့ ဣဇာက်လည်းထို့ အတူ ပြုခဲ့ပါသည်။ ပရောဖက်ကြီးက ဟောပြောခဲ့သည်မှာ “အသေ သတ်ခြင်းကိုယူဆောင်သွားသော သိုးသငယ်” ဟု (ဟေရှာယ ၅၃း ၇) ၌ ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။ အဘက သား ဣဇက်အား ချည်နှောင်သောအခါ၊ သား ဣဇာက်သည် မိမိကိုကိုကာကွယ်၍မခုခံခဲ့ပါ။ “ထင်းကိုခင်းပြီးလျှင် သား ဣဇက်ကိုချည်နှောင်၍ ယဇ်ပလင်ထင်းပေါ်မှတင်ထား၏။ (ကမ္ဘာ၊ ၂၂း ၉)။ ပိလတ်မင်းကယေရှုအားမေးမြန်းသောအခါ၊ “စကားတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မမူသည်ကိုမြို့ဝန်မင်းသည် အလွန်အံ့ဩ လေ၏” (မဿဲ၊ ၂၇း ၁၄)။ ပရောဖက်ဟေရှာယဟောကြားသည်မှာ “ထိုသူသည်ညှည်းဆဲခြင်းနှင့် နှိပ်စက် ရှုတ်ချခြင်းကိုခံ၍နှုတ်ကိုမဖွင့်ပဲနေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း ၇)။
ဣဇာက်သည်ယဇ်ပလင်အဖို့ထင်းကိုထမ်းခဲ့သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်၌မိန့်တော်မူသည်ကား “ထိုအခါ ယဇ်ရှို့စရာထင်းကိုယူ၍သား ဣဇာက်ပေါ်မှာတင်ပြီးလျှင်” (ကမ္ကာ၊ ၂၂း ၆) ဟုဖေါ်ပြ ထား ပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားမိမိအသေခံဖို့ရန်ကားတိုင်ကိုထမ်းရွက်ခဲ့ခြင်းပုံရိပ်မဟုတ်ပါလား! ကျွှန်ုပ်တို့ အားအမှတ်ရစေခဲ့ သည်မှာ “အသေခံခြင်းသာ မဟုတ်၊ လက်ဝါးကားတိုင်မှာအသေခံခြင်းတိုင်အောင် အစေခံကျွှန်ခံ၍” (ဖိလိ၊ ၂း ၈) ဟုလာပါသည်။
(၁၈၃၈၊ ၁၈၇၆ခုနှစ်၊ ဇိလိ. ပီဘလစ်သီကုံးသော ဟာလေလုယာ! အံ့ဖွယ်ကယ်တင်ရှင်)။
၄။ စတုတ္ထ၊ ထိုကျမ်းပိုဒ်က၊ ခရစ်တော်သည်အပြစ်သားတို့၏နေရာတွင် အစားဝင်အသေခံခဲ့သည် ကို ဖော်ပြနေပါသည်။
အာဗြဟံသည်ဓါးကိုယူ၍သား ဣဇာက်အားသတ်ရန်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ဖတ်ကြည့် သောအခါ၊ အာဗြဟံပြုခဲ့သမျှ၊ သင်နှင့်ကျွှန်ုပ်အားသူစိမ်းဆန် စေမည်ဖြစ်သည်။ လူသားကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမှာ၊ မှားသည်ကို အာဗြဟံသဘောပေါက်စေခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကအာဗြဟံ၏ စိတ်နှလုံးသား၌အကျပ်အတည်းဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောစုံစမ်းခြင်းသုံးမျိုးကို အာဗြဟံ ခံရပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပထမ အကြိမ်တွင် အာဗြဟံအား ခါလဒဲပြည်ဥရမြို့၊ ဆွေမျိုးသား ဖေါက်ဖော် ထဲကထွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ဆွေမျိုးများကိုထားရစ်ပြီးထွက်ခွါရမည်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော စုံစမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ရန်၊ ထိုသို့လုပ်ဆောင်နေခြင်းသည် ရှုးသွပ်ခြင်း လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟုမယုံကြည်သောသူများဆိုကြသည်ကိုကျွှန်ုပ်သိပါသည်။ မိမိဆွေမျိုးတို့ထဲက ထွက်ခွါ ရသောအခါအာဗြဟံသည်ကြီးစွာဝမ်းနည်းနေမည်ကိုကျွှန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ထိုနောက်လောတ နှင့်ပါတ်သက်၍ လည်းစုံစမ်းခြင်းထပ်မံ၍ရောက်ရှိလာပါသည်။ သူသည်နောက်ဆုံးသော မျိုးနွယ် ဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ခွဲခွါမည့် အချိန်နာရီရောက်သောအခါလောတသည် သောဒုံမြို့၌ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဟာဂါရ၏ သားနှင့်ပတ်သက်၍စုံစမ်းခြင်းရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ သား ဣရှာမေလကိုအရမ်းချစ်သဖြင့် မခွဲချင်ခဲ့ပါ၊ အာဗြဟံက ထာ၀ရဘုရားအား “ဣရှာမေလသည် ရှေ့တော်၌ အသက်ရှင်ပါစေသောဟု ဘုရားသခင်ကို လျှောက်သောအခါ” (ကမ္ဘာ၊ ၁၇း ၁၈) ဟုဖေါ်ပြထားပါသည်။ ယခုတွင်အာဗြဟံသည်ကြီးမားသော စုံစမ်းခြင်း ကိုခံခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ သား ဣဇာက်ကိုမီးပူဇော်ရမည်ဖြစ်သည်! ထာ၀ရဘုရားမိန့်တော်မူသောအရာကို အာဗြဟံသည် နားမလည် ခဲ့ပေ၊ “အကြောင်းမူကား ဣဇာက်၌သာသင်၏အမျိုးတည်လိမ့်မည်” (ကမ္ဘာ၊ ၂၁း ၁၂)။ နှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက ဂတိပြု၍ ဖွားမြင်သောသားကိုအသေသတ်ရမည်ကို အာဗြဟံနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။ သို့သော်အာဗြဟံသည် ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားသောသူဖြစ်သည်။ “ထိုသို့ပူဇော်သောအခါ သေခြင်းမှ ပြန်ရှင်စေခြင်းငှါ ဘုရားသခင် တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မေ့၏။ (ဟေဗြဲ၊ ၁၁း ၁၉)။
အချိန်တိုင်း၌စမ်းသပ်ခြင်းကိုသင်ခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားလာသည်ကိုသင်တွေ့ရ မည်ဖြစ်သည်။ ကျွှန်ုပ်အသက်တာ၌လည်းခရစ်ယာန်တစ်ယောက်မဖြစ်လိုသောအချိန်ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ လေးလံသောစုံစမ်း ခြင်းခံရပြီး စိတ်ဓါတ်ကျသောအချိန်လည်းရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် စုံစမ်းခြင်းတစ်ခုစီ တိုင်းကိုတွေးကြည့်သောအခါ အကြောင့် ကိစ္စရှိ၍သာ ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းဖြစ်သည်ကို ယခု သဘော ပေါက်ပါသည်။ ထိုသို့သောစမ်းသပ်ခြင်းမျိုး ကျွှန်ုပ် အပေါ်၌ ရောက်ရှိစေသောကြောင့်ယနေ့ကျွှန်ုပ်ဖြစ်သည် အတိုင်းဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ အာဗြဟံကိုလည်းစမ်းသပ်ခ Jhပါသည်။
“ထိုလုလင်ကိုမထိခိုက်နှင့်အလျင်းမပြုနှင့်။ သင်ကိုဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ သည်ဟု ယခုငါသိ၏။ အကြောင်းမူကား သင်၏သား၊ သင်၌တစ်ဦး တည်းသော သားကို ငါတောင်း၍ သင်သည်ငါ့ကိုမငြင်း” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ (ကမ္ဘာ၊ ၂၂း ၁၂)။
သား ဣဇာက်မရှိမီ ဖွားမြင်သောသား ဣဇာက်အား မီးယဇ်ပလင် ပေါ်၌အသေခံပူဇော်သည့် တိုင်အောင် အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သူဖြစ်ကြောင့် ထာ၀ရဘုရားသိတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် တမန်တော် ယာကုပ်က အာဗြဟံ နှင့် ပတ် သက်၍ “အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်သည်မဟုတ်လော့” (ယာကုပ်၊ ၂း ၂၁) ဟုမိန့်တော်မူ၏။ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းက အလုပ်ဖြင့် သက်သေပြသလိုက်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ယာကုပ်က “ထိုနည်းတူ အကျင့်နှင့်ကင်းသော ယုံကြည်ခြင်းသည် တပါးတည်းရှိသောကြောင့်အသေဖြစ်၏” (ယာကုပ် ၂း ၁၇)။ အာဗြဟံသည်သား ဣဇာက်အားယဇ်ပူဇော်သည့်တိုင်ဘုရားသခင်အားနာခံခဲ့ပါသည်။
ကြည့်စမ်းပါအုံး! ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာကျွှန်ုပ်၌ရှိခဲ့ပါသည်။ အဘယ့် ကြောင့် သားဣဇာက် နေရာမှာသိုးကလေးအစားဝင်ရောက်အသေခံသည်ကိုအံ့အားသင့်ခဲ့သည်။ အကြောင့်မှာ
“ထိုအခါအာဗြဟံသည် မျှော်ကြည့်၍ မိမိနောက်ချူံပုတ်၌ချိုသို လျက်ရှိသော သိုးကို မြင်လေ၏။ ထိုသိုးကိုသွားယူပြီးလျင် မိမိသားကိုယ်စား မီးရှိုရာယဇ်ပြု၍ ပူဇော်လေ၏။” (ကမ္ဘာ၊ ၂၂း ၁၃)။
ဣဇာက်နေရာတွင်သိုးကလေးအစားဝင်သကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည်ကျွှန်ုပ်တို့နေရာတွင် အစား ထိုး အသေခံ ခဲ့သည်။ ဤကျမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဒေါက်တာ လီဖေါက ကျွှန်ုပ်အတွက်အကူအညီ ဖြစ်စေ၏။ “ အချက်နှစ်ချက် ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရယူခဲ့ပြီ”၊ ဤကျမ်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ဟောကြားဝေငှ ခဲ့သည်။ ၎င်းကျမ်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အချက် လေးချက်ဖြင့် ကျွှန်ုပ်ဝေငှခဲ့သည်။
အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်အနေဖြင့် ဣဇာက်သည်အပြစ်သားနေရာ၌ နေရာယူပြီးပညတ်တော် အတိုင်း သေခြင်းဒဏ်စီရင်ရသည်။ ဣဇက်သည်အပြစ်သားနေရာ၌ ဖြစ်သကဲ့သို့ ကျွှန်ုပ်တို့အပြစ်သား အားလုံးပမာ ပုံဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့် “အပြစ်အခကားသေခြင်းပေတည်း” (ရောမ၊ ၆း ၂၃)၊ အံ့ဩစရာကောင်းသော ပုံရိပ်ပင်ဖြစ်သည်! အပြစ်သား ဣဇာက်ကို နှမြောသောကြောင့် သူ့နေရာ၌ သိုးကလေးကိုယူ၍ ကျွှန်ုပ်တို့ အပြစ် ရှိသမျှနေရာ၌အစားထိုးအသေခံစေခဲ့ပါသည်။ (ကမ္ဘာ၊ ၂၂း ၁၃)။ ဓမ္မာသစ်ကျမ်း၌လာသည်ကား “ခရစ်တော်သည် ကျွှန်ုပ်တို့ကိုယ်စား အသေခံခဲ့သည်” (၁ကော၊ ၁၅း ၃)။ တမန်တော်ရှင်ပေတရုဟောကြသည်မှာ-
“ခရစ်တော်ကိုယ်ခန္ဒာအားဖြင့် အသေသတ်ခြင်းကိုခံ၍ ဝိညာဉ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ ငါတို့ကိုဘုရားသခင် ထံတော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းငှါ ဖြောင့်မတ်သော သူတို့အတွက် ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့် တခါခံတော်မူ၏။ (၁ပေ၊ ၃း၁၈)။”
ကမ္ဘာဦး ၂၂း ၁၄ ကိုဖတ်ကြည့်သော် “အာဗြဟံက ထိုနေရာကို Jန့သလah ငြမန့” (ပြီး ပြည့်စုံသောအရှင်) ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ဣဇာက်နေရာ၌သိုးသငယ်ကိုအစားထိုးအသေခံစေသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်က ကျွှန်ုပ်တို့ နေရာ၌ခရစ်တော်ကိုအသေခံစေခဲ့သည်။ သင့်အပြစ်အဖိုးအခအတွက်လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အသေခံ ခဲ့သော ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားလိုက်ပါ! ထိုသခင်ကို ယခုတွင် ယုံကြည်ကိုးစားဖို့ကျွှန်ုပ် ဆုတောင်း ပေးပါသည်။ သင့်အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပြီးသင့်အပြစ်အတွက်အသေခံကာ သင့်အားဘုရားသခင် ထံပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်!
ခရစ်တော်ကို သင်ယုံကြည်လက်ခံသောအခါသင်သည် အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲမည်ကို သင်သည် စိုးရိမ်ကောင်း စိုးရိမ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့စမ်းသပ်ခြင်းမျိုးကြုံသောအခါ သင်သည် ရှုံးနိမ့်သော သူ ဖြစ်နိုင်၏။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတိုက်ထုတ်ပြီးရဲ့ရင့်စွာခရစ်တော်ထံသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်လိုက်ပါ။ မကြောက်ရွံ့ပါနှင့်!ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်ကယ်တင်ရှင် ထံတိုးဝင်လိုက်ပါ။ အပြစ်ကြောင့် သင့်အပေါ်သို့ ကျရောက်မည့်ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသမှ သင့်အားကယ်တင် ပေးပါလိမ့်မည်။ ခရစ်တော် ဘုရား ၏ အသွေးတော်က သင့်အပြစ်ရှိသမျှမှ သန့်ရှင်းစေပါ လိမ့်မည်။ ခရစ်တော်သည် သင့်အား ကားတိုင်ပေါ် အသေခံပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်ဘယ်တော့မှ ပြစ်ဒဏ် မခံရတော့ပေ။
အကယ်၍သင်သည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လိုပါက ဆွေးနွေးအခန်းထဲသို့ လျှောက်လိုက်ပါ။ ထိုဆွေးနွေး ခန်း၌ ဒေါက်တာ ကေကန် က မေးမြန်းပြီးသတင်းကောင်းဝေငှဆုတောင်းပေးပါလိမ့်မည်။ ယခုပင်ထိုအခန်းသို့ သွားကြားပါ။ ထိုအခန်းထဲသို့သွားရောက်လိုသော ထိုသူတို့ အဖို့ကျေးဇူးပြု၍ ဒေါက်တာ ချန် ဆုတောင်းပေးပါ။ အာမင်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာပရိုဟုန်းမှ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂း ၁-၁၃ ကိုဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ ဘင်ဂျမင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၉၀၈- ၁၉၈၉ ခုနှစ်
စတောဒ်ဟန်ဘလင် သီကုံးသော “ငါ့ဝိညာဉ်ရွေးနုတ်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကိုသီဆိုပေးပါသည်။
“ထို့နောက်မှ ဘုရားသခင်သည်၊ အာဗြဟံကို စုံစမ်းခြင်းငှါ၊ အာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍၊ အာဗြဟံက အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊ သင်သည် အလွန်ချစ်သော တစ်ယောက်တည်း သောသား ဣဇာက်ကို ယူ၍မောရိပြည်သို့ သွားလော့၊ ငါပြလတံ့သောတောင်ပေါ်မှာ သူ့ကို မီးရှို့ရာ ယဇ်ပြု၍ ပူဇော်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂း၁-၂)။
ကမ္ဘာ၊ ၂၂း၁၊ ကမ္ဘာ၊ ၁၂း ၁၊ ၁၃း ၁-၁၈၊ ၁၇း ၁၇၊ ၁၈၊ သုတ္တံ၊ ၂၃း ၂၆၊ လုကာ ၁၄း ၃၃၊ ၁၆း ၁၃၊ ၉း ၂၃
ရောမ၊ ၈း ၃၂၊ ယောဟန် ၃း ၁၆
ကမ္ဘာ၊ ၂၂း ၇-၁၀၊ ဟေရှာ၊ ၅၃း ၇၊ မသဲ၊ ၂၇း ၁၄၊ ကမ္ဘာ၊ ၂၂း ၆၊ ဖိလိ၊ ၂း ၈။
၄။ စတုတ္ထ၊ ထိုကျမ်းပိုဒ်က၊ ခရစ်တော်သည်အပြစ်သားတို့၏နေရာတွင်
အစားဝင်အသေခံခဲ့သည် ကို ဖော်ပြနေပါသည်။
ကမ္ဘာ၊ ၁၇း ၁၈၊ ၂၁း ၁၂၊ ဟေဗြဲ၊ ၁၁း ၁၉၊ ကမ္ဘာ၊ ၂၂း၁၂၊ ယာကုပ် ၂း၂၁၊ ၁၇၊ ကမ္ဘာ ၂၂း ၁၃၊ ရောမ၊ ၆း ၂၃၊ ၁ကော၊ ၁၅း ၃၊ ၁ပေ၊ ၃း ၁၈၊ ကမ္ဘာ၊ ၂၂း ၁၄။